ဒေါက်ထက် (ယူကေ) – ကုမှာလားမောင်ရဲ့ကြောက်တယ်ခင့်
ဒေါက်ထက်အနေနှင့် အမ(နုနုရည်-အင်းဝ) ကို ဒီနေရာကပဲ အဝေးကနေလှမ်းပြီး ဒီစာကတဆင့် ခွင့်တောင်းလိုက်ရပါသည်။ အမတို့နှင့်အတူ ၈၈ ခုနှစ် ကျောက်ပြဿာဒ် မိုးကုတ်ခရီးသွားစဉ်က ဆရာဦးကြည်အောင် ဆရာဦးကိုလေး (ကိုလေး အင်းဝဂုဏ်ရည်တို့အတူ ဒေါက်ထက်ပေါက်စတယောက် အမရဲ့ ”နမ်းမှာလားမောင်ရဲ့ မွှေးတယ်ရှင့်” ဝတ္ထုခေါင်းစဉ်ကို ဟောပြောပွဲမှာ ငှားပြီးသုံးခဲ့ရသေးသည်။ အခုလည်း တခါငှားပြီး နည်းနည်းတော့ ပြင်ထားပါသည်။ ”ကုမှာလားမောင်ရဲ့ ကြောက်တယ်ခင့်” ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ ဒေါက်ထက်သည်လည်း တကယ်တော့ အင်မတန်ကိုမှ ကြောက်တတ်ပါသည်။
ဒေါက်ထက်ကား ငယ်ငယ်က အလွန်ပင်ဆော့ပေသည်။ ဒေါက်ထက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် တရက်က ဘောလုံးကန်ရင်း ညာဘက်ခြေထောက် ဂျွတ်ကနဲ အသံကြားလိုက်သည်။ ညာခြေဖမိုးယောင်ပြီး ထော့နဲ့ထော့နဲ့ ဖြစ်နေသော ဒေါက်ထက် ကလေးကို အဖွားက အနှိပ်ဆရာဆီကို ပို့လိုက်သည်။ အကြောညှပ်သည်ဆိုပြီး အားရပါးရ အကြောဆွဲသဖြင့် အသားတ ဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ချွေးတွေပြန်သည့် နှိပ်ပွဲကို ပြန်ပြီး စဉ်းစားမိလျှင်တောင် ခုထိ ကျောချမ်းမိသည်။ အဖွားကို နောက်နေ့ တွေသက်သာပါပြီ အနှိပ်သည်ဆီ မပို့ပါနှင့်ဟု တောင်းပန်ရသည်။ ချိုင်းထောက်တဖက်နှင့် ဒေါက်ထက်ကလေး ထော့နဲ့ထော့ နဲ့ တလလောက်ကြာသွားသည်။ အဖွားရှေ့မှာကား ကောင်းကောင်း မထော့နဲ့ရဲ။ သက်သာဟန် ဆောင်ရသည်။ တော်ကြာ မသက်သာလို့ဆိုပြီး အနှိပ်ဆရာဆီ ထပ်ပို့လျှင်ကား ခက်ရချည်ရဲ့။ နောက်ပိုင်း ဒေါက်ထက်ဖြစ်လာမှ မိမိဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ”မာခ်ျဖရက်ချာ” ခေါ် လမ်းလျှောက်ချီတက်သွားလာရင်း ဖြစ်တတ်သည့် အရိုးကျိုးခြင်း ဆိုသည်ကို သိရသည်။ အိုကွယ် အသိရနောက်ကျလေခြင်း။ အနှိပ်ဆရာ မြန်မာပြည်မှာလူပြန်ဖြစ်ပြီး အရိုးကျိုးပါစေ ဆိုသည်မှာ မကောင်းသည့် ဆုတောင်း ဖြစ်ကြောင်း မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမရသည်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကောင်းမွန်လှပသည့် စကားလုံး ဖြစ်သော်လည်း လက် တွေ့မှာ လွယ်ကားမလွယ်ချေ။
ဒေါက်ထက်ကလေး မန္တလေးဆေးကျောင်းသားဘဝက အမေလည်ပင်းအကျိတ် ရှိသဖြင့် မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးသို့ အလည်လာရင်း ဆေးခန်းပြရသည်။ မြန်မာဆွေမျိုးသင်္ဂဟတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း မသိသူက မတတ်သူကို အကြံပေး ခံရသည်။ တောင်မြို့ခေါ်အမရပူရတွင် ဆရာပိုဟူသော နာမည်ကြီး မြန်မာဆရာ တဦးရှိသည် သွားပြပါလား ဆိုသဖြင့် အမေနှင့် အဖော်လိုက်သွားခဲ့သည်။ ဆရာပိုကား အသက်က သိပ်မကြီးသေး ၃၀ ထက်မပိုဟု ဆိုရမည်။ ခပ်တည်တည်ဖြင့် အမေ့လည်ပင်းကို ဆေးထိုးအပ်ဖြင့် ဆွကာဆွကာ ထိုးတော့သည်။ ဒေါက်ထက်မှာကား ဆေးတက္ကသိုလ် တက်ကာစဖြစ်၍ ထိုသို့ဆေးထိုးခြင်းသည်မှာ ဆေးထိုးအပ်ဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပဲ ရမ်းကုလုပ်ခြင်းဟု မသိခဲ့ပါချေ။ ဒေါက်ထက်ကို တော်တော် ကိုအသော ဆေးကျောင်းသားဟုပင် ခေါ်ထိုက်ပေသည်။ ယခုခေတ်တော့ ဒါမျိုး ရမ်းကုခြင်းတွေ ပျောက်ကင်း သွားလောက် ပြီဟု ဒေါက်ထက်တယောက် အကောင်းမြင်ကြည့်ပြီး တွေးမိသည်။ ၂၁ ရာစုထဲသို့ ရောက်နေပြီး ခေတ်မှီတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီးကို တာဝန်ရှိသူများက အကောင်အထည် ဖော်နေကြသည် မဟုတ်ပါလား။ ဒေါက်ထက်၏ အတွေးကား တက်တက်စင်အောင်ပင် လွဲနေတော့သည်။ တလွဲကို လွဲရပြန်ပါပြီ။ အဆိုကျော် ထူးအိမ်သင်၏ ”လွဲလွဲလေးပဲ ကောင်းပါ တယ်” က ဒေါက်ထက်၏ အကြိုက်ဆုံးတေးတပုဒ် ဖြစ်ပေသည်။
ဤသို့သော ရိုက်စားချက် ကုချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံကြီးတွင် ရှင်သန်ခွင့်ရထားသည်မှာ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် အံ့သြကုန်နိုင် ဘွယ်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ နှာစေးနေသော ဿပူရိသ သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကား အားကိုးအားထား ထားစရာမမြင်ရသေးချေ။ ”ခေတ်ပြောင်းလျှင်တော့” ဟူသော ကောက်ရိုးတစလေးသာ ဆွဲစရာ ကျန်တော့သည်။ ဒေါက်ထက်တယောက်မှာကား တကယ်ပင်ကြောက်တတ်သူမို့ ”ကုမှာလားမောင်ရဲ့ ကြောက်တယ်ခင့်” ဟူသော ဒီစာလေးဖြင့်သာ သက်ကယ်ချောင်း ခေါင် လောင်းထိုး၍ ကြောက်ကြောက်နှင့်ရေးပြီး မျက်စေ့ကိုမှိတ် နားကို ပိတ်မိပါတော့သည်။ ။
4 Responses to ဒေါက်ထက် (ယူကေ) – ကုမှာလားမောင်ရဲ့ကြောက်တယ်ခင့်
Catwoman on February 25, 2016 at 8:20 am
You should write more. There re many things to write. I came here to the us when I was 17 and I m nowapartner inagroup practice. I see many bad things back home. There is no preventative medicine.
You should definitely write abt people who called themselves specialist. We need fellowships here to become specialists.
ဒေါက်ထက်(ယူကေ) on February 28, 2016 at 12:22 am
Thanks for your comments. There are good and bad things back home like anywhere in the world. Bad things are good to write in deed although I find it difficult to write without upsetting some as they may regard those as personal. You might have heard that some writers have been attacked for their articles.
ပြည်တွင်းကလူတွေက အခြေအနေမှန်တွေကို သိကြပါတယ်
သူတို့က ရေးရင် ပိုကောင်းပါမယ်
ပြည်တွင်းကလူတွေဆီက အတွေ့အကြုံတွေ ရပါတယ်
Star Wraith on February 26, 2016 at 1:24 pm
ဒေါက်ထက်(ယူကေ) on February 28, 2016 at 12:24 am
ပညာရေးကတော့ လူတိုင်းကို ပေးရမှာပါ